Hayyamni warshaa warqii MIDROC haaromsamuunsaa komii kaaseera - BBC News Afaan Oromoo
Warshaan warqii Miidrook Lagadambii kan Godina Gujii, jiraattoota naannawa warshichaatti argaman irraan miidhaa qaqqabsiisaa jira osoo jedhamee komatamuu hayyamni ammas haaromsamuunsaa komii kaaseera. Mootummaan federaalaa ammoo qorannoon wayita xumuramutti kan dhiibbaa hawaasa irraan geessisu ta'uun yoo mirkanaa'e ni dhaabsiifama jedha.
Jiraattonni naannoo oomisha warqii Laga Dambii kan dhaabbata Miidrook jiraatan kemikaalli warshaa keessaa bahu guddaa nu miidhaa jira jechuun kontiraanni warshichaa akka hin haaromne gaafachaa turan. Waligalteen dhaabbatichaa waggaa 10'f haaromsamuu isaa hordofee garuu guyyaa har'aa bakkeewwan adda addaatti mormiin taasifamaa ooleera.
Qondaalli mootummaa Oromiyaa qorattoonni yaada keenya fudhachuu dhaban yeroo jedhan, mootummaan federaalaa immoo qorannoon akka taasifamaa jiru himuun yoo bu'aan qorannoo sanaa jireenya lammiilee balaarra kan buusa ta'e waliigalteen haqamuu danda'a jedheera.
Jiraattoonni Godina Gujii Aanaa Oddo Shaakkisoo naannaa warshaa warqee Laga Dambii jiraatan sababa kemikaala warqii warshichaa keessaa bahauun guddaa rakkachaa jiraachu himu.
''Gama misoomaatiin warshaan kun waan nuuf busee omaa hinqabu. Caalaayyuu keemikaalli achii bahu namaafi horii irraan miidhaa guddoo geessisaa jira'' jedha jiraataan naannichaa.
Keessattuu jedha jiraataan kun, ijoolleen dhalatan yeroo baayyee kan qaama hir'atanii dhalatan ni jiru.
Haaluma walfakkaatunis haatii mucaan ishee erga dhalatteen booda ji'oota saddeetiin booda socha'u dadhabdee tokkos miidhaadhuma kana raga baati.
Akkasumas, wallaansaaf gara mana yaalaa wayita demteetti warshaan asiidii fayyadamu naanoo isaanii jiraachu gaafatamu dubbatti haati kun.
Walumagalattis sababii keemikaala warshicha keessaa bahuutiin walqabatee haadhooliin ijoollee godhachu, jaarsooliifi dargaggoonni balaa fayyaa dhabiinsaatif saaxilamu himu jiraattoonni naannichaa.
Komii hawaasaa kana sababa godhachuu qorannoo eegaluun kan himan Daarektarri abbaan taayitaa Bosoonaafi Jijjirama qillensaa Oromiyaa Dr Hasan Yasuuf qorannichi akka hinxumuramiin himu.
Akka isaan jedhanitti, dhaabbanni Medirokiifi Ministireerri Albuudaa Boba'aafi Gaazii Umamaa garee qorattootaa Yunivarsitii Finfinnee irraa qaxaruuf, haala qorannoo isaanitiin waan hingammanneef akka qorannoo sirreessaa jennuus hintaane jedhu. ''Wantin nuti yaa fooyya'u jennee osoo hinsiroofne haaluma barbaadaniin qoratan. Nutis bu'aa qorannoo sanaa hinfudhannee jedhu,'' jedhaniiru.
Haa ta'u malee xumura turban darbee kontiraanni kaampaanii Midirok haaromsamuunsaa erga dhagahamee kaasee bakkeewwan garaa garaatti mormiin taasifameera. Mormitoonnis kontiraanni dhaabbata kanaa gonkumaa haaromsamu hinqabaatu jedhu.
Yunivarsitii Jimmaatti barsisaan Kunuunsa Naannoo kan ta'an Obbo Kaasaahun, kemikaalli siyaanaayiti jedhamu kunis haalaa to'atamuu yoo baatee dhiibbaan inni namootaafi naannoo irraa gahu olaanaa ta'u himu.
Daarektarri kommunikeeshiniifi sabqunnamtii Ministeera Albuudaa, Boba'aafi gaazii Umamaa Obbo Baacaa Faajjii, kontraati dhaabbattichaa waggoota 10 itti aananiif haaromu BBC'tti himaniiru.
Heeyyamichi adeemsa qorannoo keessa darbuun kenname kan jedhan Obbo Baacaan, qorannoo ammalleen akka hinxumuramne himu.
Gaaffii osoo qorannoon hinxumuramiin maaliif hayyama kennuun barbaachise jedhuufis, ''dursuu qabaata garuu, dhaabbatichi waggoota 20n darbaniif kan hojatan ta'usaafi gama teknikaatiin kan isaan dhaabisiisu waan hinjirreef kennameef,'' jedhaniiru.
Haa ta'u malee bu'aan qorannichaa warshichi hawaasa irratti dhiibbaa akka qabaatu kan mirkanneesse yoo ta'e, waliigalteen dhaabbattichi qabu battalumatti dhaabbachu danda'a jedhaniiru.
Komii gama abbaa taayitaa eegumsa naannoo oromiyaatiin haala adeemsa qorannoo warshaa kanaa itti gaggeefamu irratti qaban ilaalchisee quba akka hinqabnees obbo Baacaan dabaluun himaniiru.